एजेन्सी, एजेन्सी , रातारात छोटो भिडियोबाट नै भाईरल बनेकी प्रिया प्रकाश यतिबेला समस्यामा परेकी छिन्। हैदराबादको मुस्लिम यूथले प्रिया प्रकाशको विरुद्ध पुलिसमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीमा फिल्म मेकर उमर लूलू र प्रिया प्रकाशमाथि मुस्लिमहरुको भावनालाई चोट पुर्याएको गम्भीर आरोप लगाईएको छ। उजुरीअनुसार ‘Manikya Malaraya Poovi’ गीतको अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दा मुस्लिमहरुको अगमवक्तालाई बेइज्जत गरेको प्रतित हुन्छ। २ दिन पहिले प्रियाको एक भिडियो सामाजिक संजालभरि भाईरल बनेको थियो।
हैदराबादको एक व्यक्तिले फेसबुक लाईभमा यस गीतको लिरिक्सको बेइज्जत गरेको भनेका छ । उक्त व्यक्तिको नाम अदनान कमर हो । अदनानले गितको अंग्रेजी ट्रान्सलेशन पनि शेयर गरेका छन् । मुस्लिम समुदायले प्रिया प्रकाशको एक्सप्रेशन र गीतको लिरिक्सलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । पुलिसले एफआईआर (FIR) पनि दर्ता गरेको छ ।
एफआईआर लेखाउने व्यक्ति मोहम्मद अब्दुलले भने कि उनीहरुलाई प्रियाले चलचित्रमा काम गरेको कुनै आपत्ति रहेको छैन। चलचित्रको यस गितलाई शान रहमानले कम्पोज गरेका छन् । यसको अलावा हिजो यानी १३ फेब्रुअरीमा चलचित्र ‘ओरू अदार लव’ को टीजर लन्च भएको छ । यसमा पनि प्रिया प्रकाशले आफ्नो अभिनयको कारण दर्शकको मन जित्न सफल भएकी छिन् ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०२, २०७४१३:०४
विवाह भएको ४ वर्षपछि पिता बन्दै अभिनेता आर्यन सिग्देल!
तिज गितमा छम्म छम्म नाचिन अभिनेत्री निता ढुंगाना! [भिडियो]
यी चर्चित गायिकाले खुलासा गरिन् आफूसँग भएको यौन उत्पीडनको घटना!
स्व. अभिनेत्री श्रीदेवीकी छोरीले लगाएको जुत्ता बन्यो ट्रोल, यस्तो छ मुल्य!
डिभोर्सपछि मनोज गजुरेलले लेखेको फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै यस्तो भनिन् दिपाश्रीले…
भारतीय अभिनेत्री पुनम पाण्डेले क्लव डेजाबू प्रस्तुती दिन लागेको ३ मिनेटमै प्रहरीले गर्यो हस्तक्षेत !